Mahdi Guuleed “Baarlamaanow ha aqbalina in 10 nin ay matalaan masiirka dalka” | Jowhar Somali news Leader
Home News Mahdi Guuleed “Baarlamaanow ha aqbalina in 10 nin ay matalaan masiirka dalka”
Mahdi Guuleed “Baarlamaanow ha aqbalina in 10 nin ay matalaan masiirka dalka”
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa ugu baaqay Baarlamaanka Federaalka in aysan ogolaan in masiirka dadka ay matalaan 10 nin, isagoo si dadban u weeraray maamul goboleedyada.
Isagoo ka hadlayay Munaasabad xalay ka dhacday xarunta Tiyaatarka Qaranka oo lagu soo dhoweeyay matalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare ayaa sheegay in shaqo kasta oo dowladnimada loo qabanayo ay yihiin kuwo Xildhibaanada ka imaada.
Mahdi Guuleed ayaa sheegay in aan la aqbali akrin in Baarlamaan kasta markii uu saddex sano shaqeeyo in wixii ka dambeeya la yiraahdo albaabada haloo laabo, oo aysan 10 nin matali karin masiirka dadka Soomaaliyeed.
“Ha aqbalina Baarlamaanoow markii aad Saddex sano jirtaan kala taga ha aqbalina in 10 Nin masiirka dadka matalaan,ha aqbalina in 10 Nin Sharci dejiye noqdaan in 10 Nin siyaasadda dalka hoggaamiyaan,balse ogaada in waxa ugu dambeeya ee loo laabanayo ay yihiin Baarlamaanka ayuu yiri” Mahdi Guuleed.
Maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay matalaada Gobolka Banaadir ee uu ansixiyay Golaha Shacabka, kaasoo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah.